Tọghata Outlook 2003 Unicode PST faịlụ n'ime Old ANSI Format - Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Tọghata Outlook 2003-2010 Unicode PST File n'ime Usoro ANSI ochie
Tọghata Outlook 2003-2010 Unicode PST File n'ime Usoro ANSI ochie
4.90 / 5 (site na 1,592 votes)
Mara: Ikwesiri itinye Outlook iji ntuziaka a.
Ebe ọ bụ na Outlook 2003, a webatara usoro faịlụ PST ọhụrụ nke nwere ọtụtụ uru karịa nke ochie. A na-akpọkwa usoro ọhụụ akpọrọ Unicode ọtụtụ, ebe a na-akpọkwa usoro ochie ANSI usoro ọ bụla. Aha abụọ ga-eji na ndu a.
Ọ bụ ezie na usoro ọhụụ dị mma karịa nke ochie, oge ụfọdụ (mostn'ihi na ihe kpatara ya) ị ka kwesịrị ịtụgharị faịlụ PST na usoro Unicode ọhụrụ n'ime usoro ANSI ochie. Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ ịnyefe data PST site na kọmputa nwere Outlook 2003-2010 na naanị onye arụnyere Outlook 97-2002.
Microsoft ewepụtaghị ezigbo ọrụ nke nwere ike ịtụgharị ụdị ntụgharị a. Ma echegbula. DataNumen Outlook Repair nwere ike inyere gị aka n'okwu a.
Cheta na: Tupu ịtụgharị faịlụ Unicode PST ọhụrụ DataNumen Outlook Repair, biko mechie Microsoft Outlook na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike gbanwee faịlụ PST.
Họrọ faịlụ Unicode PST ọhụrụ dị ka isi iyi faịlụ PST ka emezie:
Can nwere ike itinye aha faịlụ PST ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ. I nwekwara ike pịa bọtịnụ chọta faịlụ PST ka hazie ya na kọmpụta mpaghara.
Dị ka faịlụ PST dị na ụdị ọhụụ Outlook 2003-2010 ọhụrụ, biko kọwaa usoro faịlụ ya na "Outlook 2003-2010" na igbe ngwakọta. n'akụkụ isi iyi faịlụ dezie. Ọ bụrụ na ịhapụ usoro ahụ dịka "Ekpebiri Nchekwa onwe", mgbe ahụ DataNumen Outlook Repair ga-enyocha isi iyi PST faịlụ iji chọpụta usoro ya na akpaghị aka. Agbanyeghị, nke a ga-ewekwu oge ma ọ dịghị mkpa.
Site na ndabara, DataNumen Outlook Repair ga-echekwa data echegharịrị abanye na faịlụ PST ọhụrụ a na - akpọ xxxx_fixed.pst, ebe xxxx bụ aha isi iyi PST faịlụ. Ọmụmaatụ, maka isi PST faịlụ Outlook.pst, ndabara faịlụ a gbanwere ga-abụ Outlook_fixed.pst. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Nwere ike itinye aha faịlụ a gbanwere ozugbo ma ọ bụ pịa button na-agagharị na họrọ converted faịlụ aha.
Dika anyi choro igbanwe faịlụ Unicode PST n'ime usoro ANSI, anyi aghaghi ịhọrọ usoro nke PST gbanwere na “Outlook 97-2002” na igbe ngwakọta. n'akụkụ converted faịlụ dezie igbe. Ọ bụrụ na ịtọ usoro ahụ na "Outlook 2003-2010" ma ọ bụ "Ekpebiri Nchekwa onwe", mgbe ahụ DataNumen Outlook Repair nwere ike ghara ịhazi ma gbanwee faịlụ Unicode PST gị.
pịa bọtịnụ, na DataNumen Outlook Repair ga start na-enyocha ma gbanwee isi iyi Unicode PST faịlụ. Ogwe ọganihu
ga-egosi ntughari ntughari.
Mgbe emechara ya, ọ bụrụ na enwere ike gbanwee isi iyi Unicode PST faịlụ ahụ na faịlụ ANSI PST ọhụrụ, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a faịlụ PST gbanwere ọhụrụ dị na usoro ANSI, nke Microsoft Outlook 97-2002 ga-emepe.
Cheta na: Demdị ngosi ga-egosipụta igbe ozi na-esonụ iji gosipụta ihe ịga nke ọma nke ntụgharị ahụ:
Na faịlụ PST gbanwere ọhụrụ, a ga-eji ozi ngosi dochie ọdịnaya nke ozi na mgbakwunye. Biko ịtụ ụdị zuru ezu na-ahụ n'ezie converted ọdịnaya.